gtalk မှာInviteလုပ်လို့မရလို့....ကူညီကြပါအုန်း — MYSTERY ZILLION
September 2008 edited August 2009 in Internet & Email
ုုကျွန်တော့Gtalk မှာသူငယ်ချင်းတွေကိုInvite လုပ်တိုင်းသူဒို့ဆီမှာမတွေ့ဘူးတဲ့။ သူဒို့ကပြန်ပြီးInviteလုပ်မှရတယ်။အဲဒါဘာဖြစ်တာလဲသိဘူး.သိတဲသူများရှိရင်ပြောပြကြပါအုန်းခင်ဗျား။
ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုတာလဲပြောပြပေးပါ.:Dကျေးဇူးပဲ....:5: Reply ကိုမျှော်နေမယ်နော်:D
galactico wrote: »
ကွန်ကျသွားတဲ့အချိန်မှာ အင်ဗိုက်လုပ်လိုက်တာထင်တယ် အဲဒါကြောင့် ဖြစ်လိမ့်မယ်
ကွန်နက်တင်း ဆိုတဲ့အချိန်လေ အဲဒီမှာလုပ်ရင်မရောက်ဘူး
ဟုတ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ ကျွန်တော်လဲအဲ့ဒါမျိုးလေး ကြုံကြိုက်နေရပါတယ်။ MZ Member များ ဒီပြသနာ ကိုဖြေရှင်းဖို့နည်းလမ်းလေးများပြပေးကြပါ။ ဟိုတစ်နေက Group Chat လုပ်ဖို့ [email protected] ကို Invite လုပ်တာ။ လုံး၀ကိုပြန်မလာဘူး။ Gtalk မှာ group chat လုပ်ချင်ပါတယ်။ သိတဲ့သူများ အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းလေးများညွှန်ပေးကြပါဦးလို့။
အနော်က MIRC မှာChat ပြီး gmail ရ ရင် Gtalk မှာ Invite လုပ်တာလုပ်လို့ မရဘူး....မြန်မြန်လေးဖြေပေးကြပါအုံး......အကိုတို့ရေ
သေတော့မသေချာပါ။ invite မှာ [email protected] နဲ့ [email protected] မတူလို့ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ စမ်းကြည့်ပါ။
galactico ရေ..အကိုမေးခွန်းကလည်းတမျိုးပါလား???အနော်ထင်တာ ဒီလိုပါ။
အကိုက အကို gtalk ထဲက Fri ကို remove လုပ်လိုက်မိလို့ပါ။ဒီလိုဆိုရင် တဖက်ကအကိုကိုမြင်တယ်။အကိုက remove လုပ်လိုက်တဲ့ Fri ကိုမမြင်ရတော့ပါဘူး။
ဒီလိုဆိုရင် တဖက်လူက အကို gmail ကိုပြန် add လိုက်မှ နှစ်ဦးနှစ်ဖက်စလုံး online မှာပြန်မြင်နိုင်ပါတယ်။
ကို galactio ပြေားတာအဲလိုမဟုတ်ဘူးထင်တယ် ။ သူပြောတာက new fri ကိုပြောတာဖြစ်မယ်။ old fri ကို remove လုပ်ထားတယ်ဆိုရင်တော့ အစ်ကိုပြောသလိုလုပ်မှရမှာပါ ။ new friကိုကိုယ့်ဘက်က add လို့ မရတာကိုကျွန်တော်လည်းသိချင်ပါတယ် ။
ဟုတ်ပါတယ်.......ကိုကျော်မင်းပြောသလိုပါပဲ....New fri ကို Invite လုပ်လို့မရတာပါ....သူတို့ဘက်က အနော့်ကို ပြန်ပြီး Invite လုပ်မှရတယ်....ဘာဖြစ်တာလဲမသိတာပါ...Reply လုပ်ပေးတဲ့ သူတွေကိုလဲ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်.....
အနော်ထင်တာကတော့ account လုပ်တဲ့ အချိန်မှာဘဲ တခုခုလိုသွားတာလားမသိဘူး.....ထင်တာပြောတာနော်...:D
ငါ့ညီတို့ဘာမှပူမနေပါနဲ့။ ဒါတွေကဖြစ်တတ်ပါတယ်။ google တောင်မူးသွားစေမယ့်ဟာတွေပါ။ လက်ထပ်သင်လိုက်ရင် အဆင်ပြေသွားမှာပါ။
ဘယ်သူ့ကိုလက်ထပ်သင်လို့ ဘယ်လိုမူးမယ်ဆိုတဲ့ လမ်းကြောင်းလေး တစ်ချက်လောက်ပြောဦးလေ။
ကိုgalacticoပြောတာမှန်ပါတယ်။ကျွန်တော်မှာလဲအဲဒီလိုဖြစ်နေပါတယ်....သူတို့inviteလုပ်မရပါတယ် .........Connection ကောင်:ပါတယ်..ကျွန်တော်တော့ account အသစ်ဖွင့်ထားတယ်:P
ကျွန်တော်လည်း အဲဒီလိုပဲ ဗျ..........ကျွန်တော်ဆီကနေ အင်ဗိုက်လုပ်လိုက်ရင် ဘယ်မှ မရောက်ဘူး........သူများဆီကနေလုပ်မှ.....ကျွန်တော်ဆီရောက်လာတယ်......ဟိုအရင်တုန်းက အင်ဗိုက်လုပ်လို့ရတယ်ဗျ...........အခု မရတာကြာနေပြီဗျ..........ဘာကြောင့်လည်းဆိုတာကျွန်တော်လည်း သိချင်ပါတယ်ဗျာ........
ဟုတ်ပါတယ် အဲလိုဖြစ်သွားရင် Gtalk home ကိုသွားပြီး ဒေါင်းလုပ်အသစ်ပြန်ချ ပြန်သွင်းလိုက်ပါ...
ဖြစ်ဘူးပါတယ် တစ်ခြားနစ်တွေဝင်ရပြီး တော့ အဲဒီ နစ်တစ်ခုထဲ ဝင်မရတာမျိုးလဲဖြစ်တတ်ပါတယ်
စမ်းကြည့်လိုက်အုံးမယ် ! )
on ur gtalk
click the +add and fill gmail user accout name Ex: [email protected] ,[email protected]
and then click next and finish
another way is type ur fri gmail address in the search box on ur gtalk and press enter, and then click next and finish,
ur fri mail must be @gmail.com or @googlemail.com
if ur adding time ur gtalk must be connected
some time in myanmar gtalk and gmail couldn't connected coz' internet connection
ကျနော် [email protected] ကို invite လုပ်တာဘာမှထူးမလားဘူဗျာ...
[email protected] ကို invite လုပ်ပါ။ မရလျှင် [email protected] ကို invite လုပ်လိုက်ပါ။ဒီမှာ zero ကနေ nine ထိရပါတယ်။(0 to 9)
ကိုုယ်ပိုင် chat room ဖန်တီးရန်အတွက် chat box ထဲတွင် /create chat_room ဟူသော
ပုံစံအတိုင်း type ပါ။ e.g /create MK
တစ်ခြားသူငယ်ချင်းတွေကိုလည်း partychat ကို invite လုပ်ခိုင်းလိုက်ပါ။ /join chat_room ဟူ၍ type ပါ။ e.g /join MK
ပြီးရင်တော့chat လို ့ရပါပြီ။
chat room ထဲမှထွက်လိုပါက /exit ဟု type ပါ။
commands များကိုအသေးစိတ်သိလိုပါက /commands ဟု type ပါ။
[email protected] ပါ ။ တော်တော်လေးပျော်ဖို့ကောင်းပါတယ် ၊ ၀င်ကြည့်လိုက်ပါ ။
Invite Ma ya yin easy par
@gmail.com nae @googlemail.com nae ta khu ma ya yin nout ta khu TYPE par
ok par lint mal
အဲဒီလိုဖြစ်ရင် ကိုယ်Inviteလုပ်ထားတာကို Withdraw Invitation ကို Click လုပ်လိုက်။
biggshock wrote: »
ကျေးဇူးပဲအစ်ကိုရာ အဆင်ပြေတယ် နောက်လညး်များများကြူနိုင် အဲ များများသိနိုင်ပါစေ
ဂျီတော့မှာ animation လေးတွေသုံးလို့ရအောင် ဘယ်လို ဆက်တင်တွေချပြီး၊ ဘာတွေ ဒေါင်းလုပ်ဆွဲရမလဲ ဆိုတာပါ။ သိသူများ ကူညီပေးပါ။
chit loon thu
gtalk မှာ. လုံး၀ပျောက်သွားအောင် ဘလော့ လုပ်ချင်ပါတယ်.. ပြန်ပြန်ပေါ်နေလို့.. remove လည်းးမရ.. block လည်မရ လို့ပါ..:((:((:((:((:((
chit loon thu wrote: »
gmail ကနေ delete လုပ်လိုက်လေ။:P
ကွန်းနရှင်းကျတဲ့အချိန်မှာ invite လုပ်ရင်မရောက်ဘူး (ထင်တာကိုပြောတာနော် သိပ်မယုံနဲ့) :5:
အဲဒီလိုဖြစ်ရင်အကောင်းဆုံးက အကောင့်ကိုပိတ်ပြီး ပြန်တောအကောင်းဆုံး ......... အဲလေ.......:D invite မရောက်တဲ့အကောင့် အပေါ်မှာ right click နိပ်လိုက်ပါ ပေါ်လာတဲ့အထဲက
Withdraw invitation ဆိုတာကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပါ ပြီးရင် invite again ဆိုတာကိုတစ်ခါပြန်လုပ်ပေးပါ right click နှိပ်လု်ိ့ Withdraw invitation ဆိုတာမပါဘူးဆိုရင်
invite again လုပ်ပေးလိုက်ပါ ........:5: ပြီးပါပြီး...........
အဲဒီလိုဖြစ်ရင်အကောင်းဆုံးက အကောင့်ကိုပိတ်ပြီး ပြန်တာအကောင်းဆုံး ......... အဲလေ.......:D invite မရောက်တဲ့အကောင့် အပေါ်မှာ right click နိပ်လိုက်ပါ ပေါ်လာတဲ့အထဲက